Soo dejisan SG TCP Optimizer 4.1 – Vessoft
WindowsShabakadDejinta iyo MaamulkaSG TCP Optimizer
Bogga rasmiga ah: SG TCP Optimizer
Ki Moon ee TCP Optimizer – barnaamij waxtar leh reserved iyo tayadoodii xiriir aad internet. Ki Moon ee TCP Optimizer kuu ogolaanaya in aad si toos ah ama gacanta dooro beegyada uu xidhiidhka, isbedelada in la dhaqangeliyo waa in aad bilaabi kombiyuutarka. Software ayaa awood u si ay u sameeyaan hagaajin u MTU, RWIN, QoS iyo sawirro. Ki Moon ee TCP Optimizer kuu ogolaanaya in aad si aad u hesho inta badan ka soo bandwidth ah. Software ayaa sidoo kale soo bandhigay xawaaraha xiriir hadda.
Ilaa iyo Dejinta ayna ee la xiriira internet-ka
Udajiyay bandwidth ugu sareeya
Muujiya xawaaraha xiriir hadda
Hababka kala duwan ee goobaha la xiriira
Soo dejisan SG TCP Optimizer
Faallo ku saabsan SG TCP Optimizer
SG TCP Optimizer Xirfadaha la xiriira
Aalad uu siinayaa in software shabakadda awood u leh inay ka shaqeeyaan iyada oo loo marayo server wakiil ah ay dhacdo in ay maqnaayeen. Sidoo kale software marayaa xadka brannmur oo awood u si ay u qariyaan IP-address.
Qalab ku haboon isgaarsiinta codka internet-ka. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan ama astaysto aad server u gaar ah iyo in la siiyo xuquuqda Moderators.
Barnaamijka si loo muujiyo calaamada cirifka leh wareegga midabada leh, aagga agagaarka calaamadaha ku yaal dabiiciga shimbiraha ah iyo in la sawiro curiyaha shaashadda.
Kingo ROOT – softiweer waxaa loogu talagalay in lagu siiyo superuser galaangal mid kasta oo ka mid ah howlaha aaladda Android iyo dejisa iyada oo aan la xaddidin soo-saaraha.